Mayelana NATHI - Xuzhou Kanfur Electronic Technology Co., Ltd.
I-Xuzhou Kanfur Electronic Technology Co., Ltd.
Isungulwe ngoMashi 2012, iXuzhou Kanfur Electronic Technology Co, Ltd.yinkampani yesimanje yobuchwepheshe be-hi-tech ehlanganisa i-R & D, idizayini, Ukuqamba, ukukhiqiza nokuthengisa, etholakala eChina Mining University Science Park eXuzhou. Ekuqaleni kokusungulwa kwenkampani, amadivayisi wezokwelapha, ukuvuselelwa kanye nemikhiqizo yezempilo njengomugqa ophambili wokuthuthukiswa kwenkampani.
Njengamanje, inkampani ine-R & D yethimba eliqeqeshiwe futhi elizinzile, NGOBUKHULU obuzimele be-R & D nobuchwepheshe obuphambili bokukhiqiza nokucubungula, futhi iqembu le-R & D linamandla amasha namandla ocwaningo lwesayensi, yonke imikhiqizo esiyithengisayo izimele ithuthukiswe yithimba lethu le-R & D futhi unamalungelo aphelele okuzimela kwempahla yengqondo.
Le nkampani ayizuzanga nje inhlonipho "yamabhizinisi amancane naphakathi kwezesayensi", kodwa futhi idlulise i- "Intellectual Property Management System Certification", imikhiqizo yenkampani nayo idlulise isitifiketi se-European Union CE, isitifiketi seCCC, isitifiketi se-ISET. Njengamanje, inkampani inezigaba eziningana zezinhlobo ezingaphezu kuka-20 zemikhiqizo emakethe, ene-disinfection kanye nomsebenzi wokuvala inzalo yemikhiqizo eyinhloko isibani sokuvala inzalo, imishini yokuthola imvelo inethuluzi lokuthola i-formaldehyde, unjiniyela we-intravenous, igumbi lesilawuli se-sauna. Le nkampani ibuye ithembele ku-R & D yayo, ekukhiqizeni kanye nezinye izinzuzo zezinkampani zezimboni, i-Europe, North America, South Asia nezinye izimakethe ukuhlinzeka ngemikhiqizo, yazuza ukwethenjwa ngabasebenzisi.
Inkampani yethu inamakhono wokuhlola ikhwalithi yomkhiqizo wesayensi futhi onzima, imishini yokuqapha nokuhlola ikhwalithi yesimanje kanye nohlelo lokuhlola oluqinile kuyisiqinisekiso sekhwalithi yomkhiqizo wenkampani. Imikhiqizo yenkampani incike kwikhwalithi enhle kakhulu, isabelo semakethe siyaqhubeka nokwanda, futhi ukuthengisa kuyaqhubeka nokukhula. Le nkampani yathuthuka yaba ibhizinisi elenziwa ngobuchwepheshe elinezimpawu ezihlukile zesimanje. Inkampani yethu ihlala ithobela ifilosofi yentuthuko yezinkampani "yobuchwepheshe kuqala, ikhwalithi yokuqala", isebenza ngempumelelo nangempumelelo ekuphathweni kwezinkampani zesimanje, futhi izibophezele ekubeni yisilinganiso sokuhola embonini yasekhaya. Isikhathi eside, inkampani ibizibophezele ekusunguleni izidingo zamakhasimende, ibambisene nabalingani abavulekile, izinikele ekunikezeni izixazululo ezihlelekile, imikhiqizo nezinsizakalo, futhi yenza konke okusemandleni ukudala inani elikhulu kakhulu lamakhasimende. Kulesi sikhathi sobuchwepheshe obusha obugcwele amathuba, izinselelo nokuncintisana, intuthuko yenkampani izothuthukiswa. Sizoqhubeka nokwenza ngcono uhlelo lokuphatha, sandise ukwethulwa kwabasebenzi besayensi nabezobuchwepheshe, ucwaningo kanye nokuthuthukiswa kwemikhiqizo emisha nokuthuthukiswa kwezimakethe, ukuhlinzeka ukwesekwa okuqinile kwentuthuko eqhubekayo yenkampani futhi esheshayo. Le nkampani izogxila ezimakethe, ithuthukise ukuthuthukiswa kwenkampani ngobuchwepheshe obusha, futhi izame ukwenza inkampani ikwazi ukwenza iminikelo ephezulu ezintweni zezokwelapha, ekuvuseleleni nasezimakethe zezempilo.
Ngobuchwepheshe obuhle bokukhiqiza nokulawulwa kwekhwalithi okuqinile. Ku-chip ngayinye, ibhodi lesifunda noma ingxenye, i-Comfort ingalawula ngokuphelele yonke inqubo kusuka kusitoreji ukuze isetshenziselwe ukuqinisekisa ikhwalithi ezinzile yomkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, ukuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokushiya ifektri kuyisiqinisekiso esihle kakhulu sekhwalithi ephezulu.